OTU ESI TINYE NDỊ ENYI NA TWITTER - TWITTER - 2019
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọkụ vidiyo site na kọmpụta gaa na diski, mgbe ahụ iji mee usoro a n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ pụrụ iche na kọmputa gị. Taa, anyị na-elebakwu anya na usoro nke ịdekọ ihe nkiri na ngwa ikuku site na iji DVDStyler.
DVDStyler bụ mmemme pụrụ iche maka iji mepụta ihe nkiri DVD. Enwetara ngwaahịa a na ngwaọrụ niile dị mkpa nke a ga-achọrọ na usoro nke ịmepụta DVD. Ma ihe kachasị mma - a na-ekesa ya n'efu.
Kedu esi agba ihe nkiri na disk?
Tupu ịmalite, ịkwesịrị ileba anya maka ịnweta ụgbọala maka ịdekọ ihe nkiri. N'okwu a, ị nwere ike iji DVD-R (na-enweghị ike ịdegharị), ma ọ bụ DVD-RW (nwere ike ịdegharị).
1. Wụnye ihe omume ahụ na komputa, tinye diski n'ime ụgbọala ma na-agba DVDStyler.
2. Mgbe mbido ị ga-amalite, a ga-akpali gị ịmepụta ọrụ ọhụrụ, ebe ị ga-achọ itinye aha nke ikuku nyocha ma họrọ nha DVD ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ndị ọzọ, hapụ ihe a tụrụ aro site na ndabara.
3. Ịgbaso usoro ihe omume ahụ na-aga ozugbo iji kee disk ahụ, ebe ị chọrọ ịhọrọ template kwesịrị ekwesị, yana ezipụta aha ahụ.
4. Ihuenyo ahụ ga-egosipụta windo ngwa ahụ, ebe ị nwere ike ịmepụta DVD menu na nkọwa zuru ezu, yana ịga ozugbo na ọrụ ahụ na fim ahụ.
Iji gbakwunye ihe nkiri na windo ahụ, nke ga-edechaa na accum accumulation, ịnwere ike ịdọrọ ya n'ime window mmemme ma ọ bụ pịa bọtịnụ dị n'elu "Tinye Njikwa". Ngbakwunye ọnụ ọgụgụ achọrọ nke faịlụ vidiyo.
5. Mgbe agbakwunyere faịlụ vidiyo ndị dị mkpa ma gosipụta ya n'usoro ziri ezi, ịnwere ike ịmezi nhọrọ menu diski. Na-aga na slide mbụ, na ịpị aha nke ihe nkiri, ị nwere ike ịgbanwe aha, agba, font, size ya, wdg.
6. Ọ bụrụ na ịga na slide nke abụọ, bụ nke gosipụtara ihuenyo nke ngalaba ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe iwu ha, nakwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, hichapụ windo nhazi ihuenyo.
7. Mepee taabụ na pane ekpe. "Bọtịnụ". N'ebe a, ị nwere ike ịhazi aha na ọdịdị nke bọtịnụ egosipụta na menu diski. A na-eji bọtịnụ ọhụrụ site na ịbịga n'ime sava. Iji wepu bọtịnụ na-enweghị isi, pịa aka na ya wee họrọ "Hichapụ".
8. Ọ bụrụ na ịmere ya na DVD gị, ịnwere ike ịga n'ihu usoro ọkụ ahụ n'onwe ya. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ. "Njikwa" ma gaa ihe DVD ọkụ.
9. Na windo ọhụrụ ahụ, jide n'aka na ị enyochala "Ọkụ", na dị n'okpuru ebe a chọrọ ya na ịhọrọ DVD (ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ). Iji malite usoro, pịa bọtịnụ ahụ. "Malite".
Usoro nke na-ere ọkụ na DVD ga-amalite, ogologo oge ga-adabere na ọsọ ndekọ na ngwụcha ikpeazụ nke ihe nkiri DVD ahụ. Ozugbo ọkụ ahụ gwụchara, usoro ihe omume ahụ ga-agwa gị banyere mmezigharị nke usoro ahụ, nke pụtara na site na oge a, a ga-eji ya mee ihe ndekọ maka ma ọ bụ na DVD na ihe ọkpụkpọ DVD.
Hụkwa: Mmemme maka diski ọkụ
Ịmepụta DVD bụ ihe na-akpali akpali ma kee ihe. Iji DVDStyler, ị nwere ike ọ bụghị naanị ọkụ video gaa na ụgbọala, ma mepụta DVD ọhụụ zuru ezu.